Issimada Puntland oo socdaal-nabadeed ku tahay deegaanno badan oo gobolka Bari ka mid ah; sifo xal loogu helo colaaddii Kob-dhexaad. – Radio Daljir
Issimada Puntland oo socdaal-nabadeed ku tahay deegaanno badan oo gobolka Bari ka mid ah; sifo xal loogu helo colaaddii Kob-dhexaad.
Kob-dhexaad, Sept 27 ? Issimo badan oo reer Puntland ah, kana soo jeeda gobolka Bari ayaa socdaal-nabadeed ku aadday deegaanno durugsan oo ka mid ah gobolka Bari gaar ahaanna dhulka ay wada-deggan yihiin beelihii colaaddu u dhexaysay ee gobolka Bari.
Issimada oo socodkooda dhulka ah ka bilaabay magaalada Bossaso ayaa tagay deegaanno ay ka mid yihiina Kob-dhexaad, Ufayn, Al-baraka, Balli-dhiddin, Balliga, Beel-wacatay, Unuun, Ceelgaal iyo deegaanno kale oo isla gobolka Bari ka tirsan, kana mid ah deegaannada ay deegaan ehelada xurgufaha colaadeedi ay u dhexeeyaan.
Socdaalka issimada oo lagu micneeyey in uu yahay mid nabad-raadineed ayaa dhammaan deegaannada ay tageen waxaa ay kula kulmayeen odayaasha dhaqanka iyo indheer-garadka qaybaha bulshada, iyagoo u gudbinayey farriin-nabadeed oo dulucdeedu tahay in aan dib dambe u dhicin dhibaato colaadeed.
Issimada dhaqan ee socdaalkaasi nabadeed ku hawlan waxaa ka mid ah Beeldaaje Ismaaciil Yaasiin Cali ?Cal-bari? waxaana maanta aan waraysi la yeelannay isagoo jooga degmada Baargaal ee gobolka Bari, waxaana uu sheegay socdaalkoodaasi in ay wax badan ugu soo hirgaleen, wadahadallo dhaxalgal ahna ay la yeesheen guurtida labada dhinac ee dhibaato dhex-tiillay.
Beeldaajuhu, waxaa u sheegay meelkasta oo ay tageen in si diirran loogu soo dhaweeyey loogana marxabeeyey dadaalka nabad-raadineed ee ay ku hawllan yihiin, waxaana uu intaasi ku daray in ay ku han-weyn yihiin dhibaato dambe in aysan ka dhex-dhicin eheladaasi ood-wadaagta ah.
Socdaalka issimada gobolka Bari ay ku tageen deegaannada durugsan ee gobolka Bari gaar ahaanna meelihii muddada uu tagnaa is-maadhaafka colaadeed ayaa timid kaddib markii lur-colaadeed joogsan waday muddo dhawr sano ah ka dhex-taagnayd beelo walaalo ah oo deggan gobolka Bari.